DAAWO:-Rag kasoo jeeda Puntland oo Tacadiyo Naxdin leh ugeystay Ganacsade Caan ah. | Saadaal Media
DAAWO:-Rag kasoo jeeda Puntland oo Tacadiyo Naxdin leh ugeystay Ganacsade Caan ah.
Mar 27, 2019 - 1 Jawaab
DAAWO:-Ganacsade Soomaaliyeed oo Tacadiyo ka dhan ah Bina’aadanimada loogu Geystay Dalka Mozambique.
waxaana la Ogaaday Magacyada Ragii dhaqaalaha ku bixiyay weerarkii lagu qaaday Dhibane Xaaji Abuukar Eelay.
Fadlan joojiya baahinta wararkan oo kale maadaama aanay jirin xaqiiqo aad haysaan. Waa wax laga naxo inaad isticmaashaan kalmadaha hebel oo kasoo jeeda degaankaas ayaa wax gaarsiiyay nin kasoo jeeda deegaankaas. Dadka warkaan fidinayaa waa dad la yaqaano kana shaqeeya iska horkeenka shacabka soomaaliyeed.
Waxaan la soconaa in dadka maalinkasta lagu xasuuqo xamar iyagoo loo dilayo hantidooda oo ay raadsadeen, ama nooca ganacsiga ay ku jiraan. Waxaan la soconaa in dhakhaatiir muslim ah oo siiriyaan ah la laayay oo ay ka dambeeyeen dhaqaatiir kale. Laakiin waxaas oo dhan cid tidhi hebel oo meel heblaayo kasoo jeeda ayaa dilay hebel oo meel heblaayo kasoo jeeda.
Laakiin waxaa caado noqotay in dadka Puntland kasoo jeeda gooni loo raadsado si loogu tuso waxma garatada inay cadow u yihiin. Berigii hore waxaa la odhanjiray dad bay iyo bakool kayimid baa Puntland lagu dhibaa gadaalna waxaa xaqiiqo noqotay inay arintaasi been ahayd oo dad gooni ahi wadeen qorshahaas haddana iyagii baa wada.
Laakiin kuwa websitekan leh waxaa fiicnaan lahayd inaanay soo deyn warkaan oo kale mmaddaama dadka laga cabanayo aanay siinin jaanis ay isku difaacaan. Waa mamnuuc inaad qof magaciisa webkaaga soogelisid una ogolaatid qofkale inuu soo geliyo ilaa aad hubsatid arintaas